China Single ịghasa extruder Mepụta na Factory |Jiahao
Otu ihe nkedo extruder bụ ihe nkedo Archimedean nke na-atụgharị n'ime gbọmgbọm ọkụ.N'ihi nhazi ya dị mfe, nrụpụta dị mfe, nhazi nhazi dị elu na ọnụ ala dị ala, a na-ejikarị ya eme ihe.Ọ bụ teknụzụ kachasị tozuru oke na ụdị extruder kacha eji.
Ka ọ dị ugbu a, otu ịghasa extruder amalitela site na nhazi mbụ nke okirikiri, dị ka ngọngọ ịghasa, iyuzucha ikuku, gbọmgbọm mkpọda, pin barrel, ihe owuwu ụlọ na ụdị nhazi ndị ọzọ dị iche iche.N'otu oge ahụ, n'ihi obere oghere nke otu ihe nkedo extruder na-arụ, ọ ghọọla ngwá ọrụ bụ isi na mpaghara nhazi nhazi na ihe nkiri plastik na-akpụzi.
1. Pipe extrusion: adabara PP-R ọkpọkọ, PE gas ọkpọkọ, PEX cross-njikọ ọkpọkọ, aluminum plastic mejupụtara ọkpọkọ, ABS ọkpọkọ, PVC ọkpọkọ, HDPE silicon isi ọkpọkọ na ụdị nile nke coextrusion mejupụtara ọkpọkọ.
2. Efere na mpempe akwụkwọ extrusion: adabara extrusion nke PVC, anụ ụlọ, PS, PP, PC na ndị ọzọ profaịlụ na efere.Ụdị extrusion plastik ndị ọzọ, dị ka waya, mkpanaka, wdg.
3. Extrusion nke profaịlụ: gbanwee ọsọ nke extruder ma gbanwee nhazi nke screw extrusion, nke a pụrụ iji mepụta PVC, polyolefin na profaịlụ plastik ndị ọzọ.Mgbanwe granulation: adabara ịgwakọta, mgbanwe na ike granulation nke plastik dị iche iche.
Atụmatụ nke otu screw extruder:
·Nnukwu ọsọ na nnukwu mkpụrụ Extrusion dabere na ịdị mma dị elu.
·Echiche imewe nke obere okpomọkụ plasticization ana achi achi extrusion nke elu àgwà ngwaahịa.
·Abụọ ogbo n'ozuzu imewe, ike plasticizing ọrụ, hụ na elu arụmọrụ extrusion.
·Ihe mgbochi pụrụ iche na nhazi ngwakọta zuru oke na-eme ka mmetụta ngwakọta nke ihe dị mma.
·Mwepụta torque dị elu, ibu nnukwu mkpali.
·A na-eji ihe eji eme ihe na-arụ ọrụ nke ọma na ihe ndị dị elu nke ígwè alloy, carburized na ala.
·Isi ike dị elu, imecha dị elu, mkpọtụ dị ala.
·Njikwa ọgụgụ isi PLC nwere ike ịghọta njikọ dị n'etiti igwe isi na ngwa inyeaka.
Ọ dị mfe iji nyochaa njirimara mmadụ-igwe, dị mfe ịghọta nhazi na ọnọdụ igwe.
·Ụdị njikwa (ngwa njikwa okpomọkụ) nwere ike gbanwee dịka ọ dị mkpa.
·Ngwa ahụ bụ 38CrMoAl / ọgwụgwọ nitriding, eyi na-eguzogide ọgwụ.
·Izi ezi njikwa okpomọkụ siri ike, jikọtara ya na ikuku jụrụ oyi na mmiri oyi.
·Nhazi mbata pụrụ iche, nwere ngwaọrụ jụrụ oyi zuru oke.
·The ịghasa gbọmgbọm na groove elu nri ala aka uwe nwere ike welie nri ọrụ, nke na-enye nkwa maka elu-ọsọ na elu-mkpụrụ extrusion.
Otu ihe nkedo extruder bụ isi njirimara:
Advanced kọmputa modul akara usoro na-enyere mmejuputa atumatu nke akpaka akara na mkpokọta mmepụta akara.
Usoro njikwa okpomọkụ nke arụmọrụ dị mma na-eme ka mmepụta kwụsie ike.
Sistemu eji arụ ọrụ siri ike na-emesi ike ịdịte aka na nrụzi dị mfe.
Ime nke mmanye mmiri jụrụ na nri grooved aka uwe ana achi achi na otu ebe mmepụta.
Obere abrasion imewe nke ịghasa
Ngwakọta dị elu nke ihe onwunwe
Ngwakọta ihe dị nro
Ọbụna chroma na mmetụta magburu onwe ya nke mmepụta ngwakọta agwakọtara
Nlereanya JHD45 JHD60 JHD75 JHD90 JHD100 JHD120 JHD150
Ike moto (KW) 7.5-45 22-90 37-132 45-185 55-280 75-315 90-355
skru dia.(mm) 45 60 75 90 100 120 150
Oke L/D 25-33 25-33 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35
Plastic emepụtara PVC, PE, PP, PS, ABS, PA, PMMA, PET wdg
Mbupute extrusion Dị iche iche dị ka plastik dị iche iche na moto a kwadebere
Nke gara aga: Igwe mkpuchi profaịlụ plastik kacha mma - Single screw extruder - Jiahao
Osote: Ejima conical extruder
Ugboro abụọ ịghasa Extruder
Ugboro abụọ Screw Plastic Extruder
Obere Screw Extruder Machine
Plastic Granules ejima ịghasa Extruder
Pvc ejima screw Extruder
Igwe ihe mkpuchi mkpuchi
Otu ịghasa Plastic Extruder
Igwe ejima ịghasa Extruder igwe
Ejima Screw Plastic Extruder